Ọrụ Dubai na visa maka ndị si mba ofesi na nkwado
Dubai ọrụ na visa
Ọrụ Dubai na visa maka ndị na-achọ ọrụ. Bụ ndị si mba ọzọ na-achọ ọrụ na Dubai?. Emechaa ọtụtụ edemede maka ndị na-achọ ọrụ. Anyị achọpụtala ways na ntuziaka na-enyere gị aka ịchọ ọrụ na-enye ọrụ. Companylọ ọrụ anyị na-enyere ndị mmadụ aka ịchọta ọrụ. Isiokwu kachasị ewu ewu bụ ka esi enweta ọrụ nrọ ahụ. Ọtụtụ n'ime ndị na-achọ ọrụ anaghị enwe visa ahụ. Ebe obu na ibia na ibe njikọ anyi. Na-enwe visa na aka gị.
Na-achọ ọrụ ugbu a. Companylọ ọrụ anyị na-ekwukarị okwu na-enye aka na nyocha ọrụ. Karịsịa maka ndị si mba ofesi si Pakistan na India. Companylọ ọrụ anyị nyere aka na otu esi enweta oru na Dubai na Abu Dhabi.
Dabere na profaịlụ LinkedIn anyị. Ndị si mba ọzọ ọhụrụ si n’etiti Middle East niile na North Africa. Kwa ụbọchị na-achọ ndị ọrụ mbanye. Buru nke a n'uche, Ndụmọdụ ndụmọdụ nke Dubai nwere ike inyere gị aka. Na nyocha ọrụ na ụzọ ịmepụta profaịlụ gị ga-eme ka onwe gị baa uru karịa ndị were mmadụ n'ọrụ.
Maka ọrụ ndị Dubai na ihe ndị metụtara visa 2019 na Nkwupụta 2020 na-ekwu na azụmaahịa Dubai. Kpamkpam ga-ebili ma hụ ịnwe ọrụ ọhụụ gburugburu ahịa Emirates maka expats na n'ezie ga-elekwasị anya na ọrụ 2020 Expo Dubai na visa ndị isi na-adị njikere ịrụ ọrụ ozugbo.
Ndị na-achọ ọrụ anyị na-achọ ka anyị na-akụ na UAE
Ọrụ kachasị mma maka ndị na-achọgharị onwe ha
100% Ọrụ Nzuzo Ọ dịghị Visa achọrọ Biko bulite Resume Iji Dubai! Ghọtara ma gaa na Dubai. Ndị otu anyị ugbu a Inyere ịchọta ọrụ na Dubai Na Abu Dhabi maka ọnọdụ dị iche iche na United Arab Emirates. Biko gbakwunye email gị n'okpuru ebe a, anyị ga-agbalị ịmepụta gị site na njedebe ọnwa. Nwere olileanya na gị na gị ga - arụ ọrụ tinye gị na United Arab Emirates!
Chọta ọrụ ụlọ ọrụ na visa Dubai
N’eziokwu, ọ bụrụ n’inwee visa na-arụ ọrụ. Ihe niile ị chọrọ bụ chọpụta otu esi enweta ọrụ nrọ. Citylọ ọrụ Dubai City n'aka nke ọzọ na-enye gị ihe ngwọta. Anyị na enyere ndị ahịa aka ịzụ onwe ha. Ndị otu ndị na - ewe ndị ọrụ n'ọrụ anyị na - anwale ibipụta akwụkwọ edemede na ndụmọdụ dị na otu esi achọta oru na Dubai.
Ụlọ ọrụ visa ụlọ ọrụ Dubai, anyị niile maara na ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na UAE. Ikwesiri ịma kedu ndị ọkachamara na-ere na Dubai?. Ebe m ga-ahụ ụlọ ọrụ na-enye ọrụ Dubai ma ọ bụrụ na m nwere visa. Site na ọtụtụ ọrụ anyị, otu anyị na-ahụ maka ọtụtụ nhọrọ maka ndị na-achọ ọrụ ọhụụ. Nke mbu bu ijiko ndi n’oru ma obu ndi oru. Anyị na-enye maka nke ahụ Ntụziaka mbanye Dubai maka ọrụ na Emirates. Can nwere ike izipu nkọwa gị ma ọ bụ chọọ naanị maka Ọrụ na visa na Dubai. Ma ọ bụ n'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịchọ ọrụ na-enweghị visa. Nke a abụghị nnukwu ọrụ.
Ị ga-eche dịka otu n'ime onye a gọziri agọzi. N'ihi na ọ bụghị onye ọ bụla na-achọta ọrụ na Dubai na Visa. Anyị na-agbalị inyere gị aka ntakịrị na nyocha ọrụ gị. Ọ bụrụhaala na ị ga-agbaso anyị ndu maka ndị ọpụpụ iji nweta ọrụ na Dubai. Ị ga emewanye ohere ịchọta ọrụ na UAE.
Tupu anyị aga n'ihu, echefula na i nwere ike ịchọ ọrụ na Dubai n'elu mobile. Ikwesighi ka laptọọpụ kachasị gị mkpa. Ị nwere ike ịme profaịlụ na ọtụtụ ọrụ ọrụ. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ijikwa akaụntụ ahụ site na ịpị otu iziga ndị ọrụ.
Kedu otu esi achọta ọrụ na Dubai na visa?
Kedu ka m ga - esi malite ngwa ngwa na Dubai?
Nke a anaghị esiri gị ike. E nwere ọtụtụ ohere ịchọta ọrụ na Dubai na-arụ ọrụ visa. Ezuru site na mba nile na-aga United Arab Emirates. Dịka ọmụmaatụ, enwere ọtụtụ ohere maka ọrụ na Dubai maka Filipino ndị ọrụ. Dubai ọ bụ ebe nrọ maka ndị isi ọrụ. N'ihi na ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ ndị na-akwụ ụgwọ na Middle East. Inwe ụlọ ọrụ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. Na ọrụ na nyocha ọrụ na-enyere aka dị mfe na Dubai na Abu Dhabi. N'ihi na ọtụtụ Ụlọ ọrụ Dubai na-arụ ọrụ n'ime mba ụwa.
Ụlọ ọrụ anyị ga-achọ ka azịza ziri ezi nye ajụjụ a. Ụlọ ọrụ obodo Dubai City ejirila ọtụtụ usoro atụmatụ maka ndị na-achọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị bụ achọ ụlọ ọrụ Dubai na visa ma ọ bụ na ịnweghị visa. Kpamkpam, ọ bụrụ na ị soro ndụmọdụ anyị maka ọrụ. 'D ga enweta nnukwu ọrụ na Dubai. The iju eziokwu bụ ime nyocha maka oru abughi ihe di nfe.
Enwere m ọrụ na Dubai?
Mana ịkwesighi ichegbu onwe gị banyere nke ahụ. Companylọ ọrụ Dubai City na-ahụ maka ịmepụtara gị ọtụtụ ihe nchịkwa. Kachasị anya maka inyere gị aka ịkọ ọrụ na UAE. Imirikiti nke ndụmọdụ na ibe Ndụmọdụ ị nwere ike iji mee ka ndụ gị rụọ ọrụ nke ọma karị. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye mba ọzọ ma na-achọ ọrụ Dubai na visa.
Anyị Dubai blog juputara na ihe omuma banyere ihe bara uru. Anyị na-ezigakwa ọhụụ blog ọhụrụ kwa izu. Oge ọ bụla anyị biputere edemede. Anyị nwere olile anya na anyị kere ya iji nyere gị aka ịchọta ọrụ nro na Dubai. Ka anyị jee ije gị iche iche ị nwere ike iji nweta ọrụ.
Ọrụ Dubai na nkwado visa?
N'okpuru ụlọ ọrụ anyị na-enye gị ngwọta kachasị mma. E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ugbu a na United Arab Emirates. Site ụlọ akụ na ego na-arụ ọrụ, ruo ụlọ ọrụ ụgbọala na Dubai na Abu Dhabi. Enweghi ike inwe ohere maka oru Dubai na ndi oru uzo a kwadoro. Ndị otu anyị na-elekọta gị ụlọ ọrụ ndị na-esonụ. Imirikiti n'ime ha na-enyere gị aka ịbanye n'ọrụ karịsịa ma ọ bụrụ na ịnwe visa na Dubai na UAE. Ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ ugbu a na Bayt.com, Linkedin, na Facebook.
Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ị nwere ike iji iji nweta ọrụ na Emirates. Site na ụlọ ọrụ nchịkọta elu ruo ọrụ ndị metụtara gọọmentị. Ị nwere ike ịchọta ọrụ visa na Dubai. Site na echiche anyị, ị ga-enweta onwe gị ma tinye maka ọtụtụ saịtị ọrụ n'okpuru ebe a.
Dịka onye ọpụpụ ọhụrụ na Dubai, ị nwere ike ịjụ ọtụtụ ajụjụ. Ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ntinye akwụkwọ ikike visa maka ndị ọpụpụ ọhụrụ. Ma na ụdị ọrụ visa a, ịkwesighi ichegbu onwe gị maka ọtụtụ ọrụ ịchọta ọrụ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi.
Inwe ụlọ ọrụ na-ezigara visa na Bayt
Bayt.com ụlọ ọrụ mbụ ị kwesịrị ịlele na nyocha ọrụ gị. N'ezie bu nke kachasi ndị na-arụ ọrụ na UAE maka ndị India. Kwesịrị ka anya gị dị na anya onye na-arụ ọrụ na Dubai. Ndị Bayt na-arụ ọrụ na ndị isi egwu ya na azụmahịa mbanye. Powerdị ndị a bụ Manpower Group, Parson Limited International na Huxley.
Enwere ọtụtụ isiokwu banyere ụlọ ọrụ a. Na Bayt.com ị nwekwara ike ịchọ maka ọrụ na MBA agụmakwụkwọ. Ọrụ dịka onye injinia ma ọ bụ ọbụna onye ahịa. Ọzọkwa, saịtị a na-anakọta kwa maka Middle East dum. Ị nwere ike ịchọta ọrụ ohere niile na GCC. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịchọ maka ọrụ na Saudi Arabia ụlọ ọrụ.
Bayt.com site na 2000 ruo 2018. Bụrụ onye na-ahụ maka ọrụ nchịkwa na Middle East. Jiri nlezianya na-eleba anya n'ime uto n'ime Ógbè Gulf maka ndị na-achọ ọrụ. Bayt.com enyere ọtụtụ puku ndị na-achọ ọrụ na GCC. Dịka eziokwu, ha na-arụ ọrụ n'Africa ma ha bụ na-akwụ ndị ọfụfụ expatriate South Africa. Uru nke ụlọ ọrụ ahụ na-anọchite anya ọkwa mmadụ niile. Bayt na -ewe ihe n’obodo niile ụlọ ọrụ na UAE. Ọzọkwa bụ ụlọ ọrụ mbụ bụ ndị mba ọzọ nọ na region.
Ụlọ ọrụ Dubai maka ndị na-ere ahịa na Expo 2020
Ọrụ Dubai na ndị na-achọ ọrụ na visa nwere ike itinye maka Expo 2020 ọrụ. Ebe a na-abịa ọhụrụ abịa ugbu a na Dubai aga-eji gaa. Expo 2o2o ebumnuche bụ nabata uwa nile n’Amiri na Middle East.
Isi echiche bụ ijikọta uche dị ukwuu site na ụwa dum. N'iburu nke a n'uche ga-enyere aka kee ọdịnihu. Ebe a ga-amalite na 20th nke October 2020. Nke a ga-abụ nke mbụ World Expo na otu n'ime ohere kacha mma maka ọrụ. Otu n'ime ebe kacha mma ịmalite ọrụ ahịa. N'ihi na ebe a na-eme na Middle East. N'ezie, Gọọmentị nke Dubai na Abu Dhabi ga-ebuli aka maka ndị ọgbọ.
Tinyere Africa ma ọ bụ South Asia. Njikwa Expo 2020 ga-eweta nkwekọrịta ọhụụ. Ọzọkwa ọtụtụ ohere maka ndị na-achọ ọrụ ọhụụ. Ọzọkwa n'ezie nye ndị ọrụ ọhụrụ ụgwọ maka ego ọhụrụ maka azụmaahịa na owuwu. Ọ bụrụhaala maka ụlọ ahịa ụlọ yana ọrụ ile ọbịa, njem, na ọrụ ụgbọelu.
Mgbe iziga ngwa maka Expo na Dubai?
Ndi oru choro ohuru kwesiri ijikwa uzo oru ugbua. Ebe ọ bụ na ọhụụ ọhụrụ ga-eru ọtụtụ ijeri Dirhams aka ga-abanye ụzọ tupu oge amalite. Ngosipụta 2020 ga-enwu atụmanya ọrụ maka ndị India na-achọ ọrụ. Enwere ọtụtụ ndị ọrụ nkwekọrịta ọhụrụ na Dubai na Abu Dhabi. Expo 2020 na-abịa Dubai, na ọtụtụ ohere ọ ga-ebilite maka gị. Yabụ, egbula oge ma bulite ịmaliteghachi n'oge kwesịrị ekwesị. Ọ dị mkpa mgbe aga-eziga CV gị. N'ihi na ụfọdụ n'ime ndị na - ahụ maka ọrụ na - ewepụta oge. Gbalịa ịbụ ọkachamara marakwa mgbe izipu akwụkwọ ọrụ.
Ya mere ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na iwu, ụtụ isi na akaụntụ ohere. I kwesiri itinye ihe gbasara 2019 na 2020. Maka ego na akụ na ụba mmadụ tinye na 2018 n'ihi na ha na-ewegharị oge. Na njedebe, anyị na-enwe ọgwụ ọgwụ FMCG. Mgbe ahụ maka azụmaahịa na boutique mpaghara ụlọ ọrụ ntinye akwụkwọ nwere ike ịme ọnwa ole na ole tupu Expo 2020 amalite. N'akụkụ aka nke ọzọ maka ulo oru mbo ọrụ ị kwesiri inwe ọnọdụ ugbua.
Pịa foto iji sonye ọrụ ọrụ Dubai maka ndị na-ere ahịa na Expo 2020!
Chọta visa na Dubai na Linkedin
Linkedin bụ isi iyi maka ọrụ UAE. Ndị si n'ahịa ndị Dubai na-ahụ Linkedin n'anya. Ma, a na-arụkarị netwọk mmekọrịta a maka ndị isi ụwa. Otu n'ime ebe kacha mma maka ịchọta njem-na ajụjụ ọnụ na Dubai. Na ọkwa ndị ọzọ metụtara ya site n'ahịa ahịa UAE. LinkedIn bụ otu n'ime ihe kachasị mma ma ọ bụrụ na ị maara otú iji ya mee ihe n'ụzọ dị mma. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ijikwa ọrụ dị iche iche ewetara na UAE. Ịchọta njikọ ọhụrụ nke gị na ebe ha na-akwụ ụgwọ. N'aka nke ọzọ, ị nwekwara ike ijikwa ịbanye n'òtù dị iche iche. Ọmụmaatụ Ndị otu Dubai. N'etiti ìgwè dị iche iche, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ndị nnọchiteanya nọ na Dubai.
Linkedin na-enyere ndị na-achọ ọrụ aka na-achọ ọrụ. Ị ga-agbaso ụfọdụ iwu, dịka ọmụmaatụ, lelee ntuziaka zuru ezu maka ndị na-achọ ọrụ maka Linkedin. Ịkwesịrị ịma otu esi ejikọta na ndị ọrụ nchịkọta. Otu esi emeso ndi isi ulo oru. Na otu esi agakwuru ndị ọrụ gị. Karịsịa site na Middle East. Na Linkedin ga - enyere gị aka n'ọrụ nke ahụ bụ eziokwu. N'ihi na 80% nke ndị ọrụ nchịkọta na-elele profaịlụ mmadụ.
Otu n'ime ihe atụ bụ otú netwọk mmekọrịta nwere ike inyere gị aka n'ịkụzi ọrụ. Ndi mmadu n’agbanwe otu akwukwo dika I guru. Kpamkpam ga-elele profaịlụ gị. Ma ga-elele agụmakwụkwọ gị. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ dịka onye isi nchịkwa ọkachamara. Karịsịa maka ọrụ dị elu ma ọ bụ ọkwa ọhụụ na ọkwa Dubai na visa. I tosiri mee ka njirimara Linkedin gị enweghị ntụpọ. Netwọk mmekọrịta a ga - enyere gị aka ịghọ onye na - abanye na United Arab Emirates.
Ọrụ Dubai na startups na Angel.co
AngelList ụlọ ọrụ bụ otu n'ime saịtị kachasị mma. Karịsịa maka ndị isi ụlọ na-achọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-arị elu. A na-emepụta weebụsaịtị a na 2010 maka ụlọ ọrụ ọhụrụ na mmalite. Ọzọkwa, ị nwere ike ịhụ ọtụtụ mmụọ ozi investors. Otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma iji malite ọrụ na United Arab Emirates. Enweghi oke ndị na-achọ ọrụ site na Pakistan ma ọ bụ ndị India. Ya mere na ụlọ ọrụ a, ị ga-enwe ụfọdụ uru.
Ebe dị ezigbo mma maka ọrụ dị ukwuu -achọ ndị na-achọ ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ mmalite. Angel.com ebidola dịka ụlọ ọrụ mmeghe dị mkpa maka mmalite teknụzụ. N'oge ahụ companylọ ọrụ ahụ chọrọ ego mkpụrụ iji bido ọrụ. Oge ọgba aghara a na-azụmaahịa dị na 2015. Na ụlọ ọrụ a, ị nwere ike ịchọta kachasịnụ mmalite mmalite mmalite. Chọpụta onye na-elekọta ụlọ ọrụ ahụ. Ego ole ka etinye ego, na mgbe ụlọ ọrụ ị na-achọ ịmalite bụ ego.
Kemgbe ahụ Angel.com na-enye ohere mmalite iji bulie ego site n'aka ndị mmụọ ozi investors. E nwere ọtụtụ nsogbu ọhụrụ na-amalite ụlọ ọrụ si Abu Dhabi na Dubai. N'ihi ya, n'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ndị investors ọhụrụ sitere na UAE. N'ikwu okwu n'ozuzu, kpọọ ndị ọzọ na-azụ ahịa. Angel.co na - arụ ọrụ dịka netwọk mmekọrịta ndị ọzọ. Ị nwere ike ịchọ mgbe niile Ndị nchịkọta ụwa ma jikọọ na ha.
Chọta ọrụ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi na WhatsApp
Ihe ọzọ dị mma Oru Dubai. Nwere ike sonyere ọtụtụ ndị ọrụ. Iji maa atụ, ndị otu ọrụ mpaghara dị maka ndị na-achọ visa ha na ọrụ Dubai. Na otu WhatsApp anyị, you nwere ike ịgwa ndị nwe azụmahịa okwu. Mụ na ndị ọzọ si mba ọzọ kwabata ma na-ezute ndị isi nchịkwa ndị ọzọ. N'oge a enwere ọtụtụ ndị ọpụpụ ọhụrụ ndị na-achọ ndị ọrụ na WhatsApp.
Ụlọ ọrụ Dubai dị ugbu a na-enweta ọtụtụ arịrịọ karịa ụmụ nwanyị na-ebubata ha. N'ime ndị otu mbanye. Naanị n'ihi na obodo Dubai na-eto kwa ụbọchị. Karịsịa ya na ndị ọbịa India na Pakistan na Dubai. N'ikwu eziokwu, ọ bụghị ihe dị mfe maka ndị na-achọ ọrụ mba ụwa iji nweta ọrụ na UAE. Ọtụtụ n’ime ha na-agbasi mbọ ike ịchọta ọrụ. Karịsịa ezumike mba na mba Gulf. Na-arụsi ọrụ ike iji ruo otu ihe.
Facebook maka ọrụ na Dubai
Site na ndị isi mmepe azụmahịa ruo onye gbara izu na MENA. Otu n'ime ụlọ ọrụ ikpeazụ mezue ndepụta mmechi maka ndị na-achọ ọrụ na UAE bụ ndị na-achọ visa na ọrụ Dubai na visa. Anyị kwesịrị ịgbakwunye facebook na ndepụta nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Dubai. Ọrụ Facebook na-akpọkwa ndị ọrụ ngo. Ọ bụrụ n’inwere mmasị ịrụ ọrụ nkwekọrịta na Facebook ?. Kwesịrị ileta ndị Facebook Nkwekorita ohere ebe ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na ụlọ ọrụ ngwanrọ. Ikwesiri ịmatakwu banyere Facebook na Omenala Dubai, Gị na ndị ọzọ kparịta ụka, ma chọọ ọrụ ọhụrụ. Famouslọ ọrụ a ma ama akpọrọ Facebook's na-arụ ọrụ na Dubai kemgbe 2009. O nwere ozi gi na ha choro inye ndị mmadụ ike ịkekọọrọ ndị ọzọ akụkọ ha. Gbalịa mee ka ụwa meghee ma nwee njikọ. Site na Canada rue India, site na Kuwait ruo Singapore, na-arụ ọrụ n'ụwa niile dị ka onye mba ọzọ na Dubai na Facebook.
Kasị Mma Ụlọ ọrụ maka Management Ọrụ!
Bido ụlọ ọrụ ịkwụ ụgwọ kacha mma
Nyere aka guzobe akụrụngwa ịkwụ ụgwọ nke ịntanetị. N'oge ha kacha ụlọ ọrụ ịkwụ ụgwọ ego na US N’oge a, ha anaghị arụ ọrụ na Dubai, mana dị ka njem ọhụrụ, ị nwere ike nweta ọrụ na ha na India, Dublin, na London. Otú ọ dị, ha na-atụ anya ịchụkwu ndị mmadụ na Middle East na 2020. Mgbalị na oge bụ ụlọ ọrụ kacha mma.
Stripe na-enye mkpuchi ahụike, eze, na ọhụhụ ọhụhụ baara gị na ezi na ụlọ gị uru. A na-enye mkpuchi mkpuchi ndụ na uru nkwarụ. Uzo ahu na-ele anya na-ewe ndị ọzọ ọrụ ịre ahịa ahịa mba ofesi sikwa mba ofesi. Uru ọzọ bụ ụgwọ nne na nna a na-akwụ ụgwọ na ịkwado maka nnabata. Na maka ndị ọrụ ọhụụ, ha na-enyere aka na oge ọrụ mgbanwe.
Mgbapụ na-enyekwa atụmatụ 401 (k) maka ndị ọrụ ọhụrụ ha. Ha na-enwe oke uru na ịba uru. Na-agba, ị nwere ike ịnwe asọmpi izu ụka asọmpi. Nri ụtụtụ, nri ehihie, na nri abalị gụnyere mgbe ha na-arụ ọrụ ọ bụla. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ịnabata ọrụ ịkwụ ụgwọ. Were ọrụ na Stripe, ụfọdụ uru ga-agbanwe site na ọnọdụ. Mana ọ bara uru ịmalite iso ha rụọ ọrụ n'ihi na ha nwere ọtụtụ ọrụ nchịkwa.
Malite oru UBER n'UAE
Uber na-ewu ihe ndị mmadụ na-eji kwa ụbọchị. Ihe dị ka tagzi na 2 min na-asọpụ. Na UBER ị ga-arụ ọrụ mgbe ọrụ mbụ gị gasịrị. Dịka ọmụmaatụ, ịkwesịrị inwe ikikere ịnya ụgbọ ala dị ike na mmetụta nke ahụmahụ ịkwọ ụgbọala. Mgbe na-arụ ọrụ na UBER ị ga-ama otú ị ga-esi rie nri n'ụzọ dị ngwa. N'ezie, ị ga-amụta otú ị na-esi ebugharị nnukwu ihe ọ bụla na ebe ndị ahịa chọrọ.
Withrụ ọrụ na UBER chọrọ nnukwu ego nke oge ọrụ. Otu oru ya na UBER na-atụnye ụtụ ọhụrụ na ngalaba teknụzụ. Karịa ụwa nwere ike ijikwa usoro ole na ole ịga n'ihu na ọkọlọtọ Ọrụ Emirates. Mana enwere otu akụkụ kachasị mma maka iso UBER rụọ ọrụ. Imirikiti ndị mmadụ maara na ọrụ gị ime ya ga - enyere ndị ọzọ aka ịkpụzi ọdịnihu. Dị ka iburu ha n'ọdụ ụgbọ elu na ịnya ụgbọ ala maka ịgaru ebe ndị njem. Gettingbịaru ọganụ ahụ ga-apụta ga-esoro ụlọ ọrụ kacha mma n'ụwa rụọ ọrụ. Nothapụ ikwu na ha nwere ngwa ekwentị kachasị mma.
Nwee anya maka iche ọrụ nlekọta cryptocurrency na Dubai na Abu Dhabi. Ònye maara na ị nwere ike ịnweta ọrụ nchịkwa na Dubai na UBER.
Ọrụ na Ọkara Dị ka Ọrụ Manager
Ihe mgbaru ọsọ bụ ịkwaga n'ihu. Site na azụmahịa ndezi ruo onye na - eweta ndu kachasị mma maka ndị na - ede blọgụ. Enwere ihe ngbasa ozi ahia di nkpa taa na ịde blọgụ. Afọ 100 na-esote site na nyocha nke ide ederede n'eziokwu. O doro anya na a ga-egosipụta mkparịta ụka n’ụwa niile. Companylọ ọrụ na-ajụ ase na-achọ ndị otu egwuregwu, ọ bụghị ọkọlọtọ ndị ọrụ. Ma ọ bụrụ na ị na-achọ nlekọta ọrụ na Dubai ị kwesịrị gbalịa ihe ịma aka a ma chọta ezigbo ọrụ.
Ọkara na-achọ ụdị dịgasị iche iche n'etiti ndị mmadụ, ndị ọkachamara ruru eru nke nwere ogo, na ahụmahụ ndụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị bụ akụkọ ịhụnanya blogs. Nke a ọrụ bụ otu n'ime ihe kacha mma maka gị na Dubai. Karịrị onye guzobere ha rụpụtara ihe abuo nke kacha agbanwe maka ịkekọrịta echiche n’ịntanetị, Blogger na Twitter. Yabụ ọ bụrụ na isonyere ụlọ ọrụ a, ị ga-anọ n'aka nri.
Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ezigbo nkà IT. Ya mere, Medium.com bụ ezigbo ụlọ ọrụ maka gị. Ma ọ bụ ị na-enwe ihe ịtụnanya ahụmahụ ndị ahịa. Lụọ ọgụ maka ọrụ underdog na Medium. N’aka nke ozo, nchebara echiche na mmetuta obi oma bu isi ihe maka oru a. Ndị na-ahụ maka ọrụ n'anya na-ahụkarị okwu n'anya ka nwere ihe. Likeda dị ka gị? Gwa ha ka ha zitere CV gi emelitere maka ọrụ nchịkwa na Dubai.
Ọrụ na Facebook na ọnọdụ njikwa
Ozi Facebook Inc bụ ejikọta ndị mmadụ na ndị ọzọ. Isi okwu bụ wube obodo n’uwa niile. Nyere ndị ọzọ aka igbo mkpa ọdịmma ha. Ọzọkwa, Facebook na-ele anya ime ka ụwa dịrị n'otu. Ozi si n’akụkọ Facebook na-eme na oge ntanetị niile. Ndị otu njikwa ahịa dị nnukwu ma nwee oke. Yabụ, ịchọta ọrụ na Facebook na Dubai kwesiri imere gi.
Facebook na-arụ ọrụ ngwa ngwa ma na-arụkọ ọrụ na ndị ọrụ ha. Ha bụ odi nma iji wuo otu onu karie. Nsonaazụ bara uru karị na ọnụ ọgụgụ ụwa maka ndị ọrụ ibe ha.
Ebe ọ bụ na ị tinye maka ọrụ gbalịa inwe obi ike. Ike agwụla gị, n'ihi na ha nwere ọtụtụ ndị ọhụrụ na-asọpụrụ ha ọbụna site Filipino ka Dubai. Ahịa mgbasa ozi mgbasa ozi na-eto eto iji kpebisie ike iji wuo ohere ka mma, ụwa jikọtara maka onye ọ bụla.
Facebook na-agba ụgwọ maka ndị agadi ọrụ na Dubai. Ha na-ele anya dị ka ndị na-eme oghere site na injinia ruo ndị nrụpụta na ndị ahịa. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ohere ọ bụla ị nwere ike ịnweta na Facebook. Na Facebook na-enyere ndị mmadụ aka na-arụ ọrụ na ahịa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ. Companylọ ọrụ a n'ezie na-enwe mmetụta na ndụ ndị mmadụ. Yabụ, mgbe gị na ha na-arụ ọrụ, ị ga-akwụ ụgwọ maka ime ka ihe dị iche, enweghị oke ihe ị ga - eme ka ị na - arụ ọrụ na ọwa mgbasa ozi.
Google Careers na Dubai
Ugbu a bụ oge maka ụlọ ọrụ Google. Ọgbakọ ruru ọtụtụ nde dollar. Iji nweta ọrụ na Google ị ga-agafe usoro 3. Nke mbu ị ga-achọ nnukwu ọrụ. Mee nyocha miri emi banyere ọkwá dị elu. Ọzọkwa, tinye ọrụ njikwa na Dubai chọọ n'ọchichọ nke oghere gị. Iji nweta bọọlụ na-agba ọsọ, lelee Google ọrụ Atụmatụ tupu i tinye.
Akụkụ nke abụọ nke ịchọta ọrụ na Google bụ ịga ajụjụ ọnụ. Onye nchịkwa gọọmentị ga-ajụ gị ajụjụ site na njirimara nke echiche. Dịka ọmụmaatụ codings na HTML, Joomla na ajụjụ ndị ọzọ metụtara IT. Google na-agbarịta ụka ugboro ugboro tụnyere ndị ọzọ. E nwere ihe ụfọdụ ga-enyere gị aka ịkwadebe maka ụdị ajụjụ ọnụ.
Mgbe ngwa gị ga-aga nke ọma. Mgbe ahụ, ndị nlekọta Google na-eburu gị site na ihuenyo ekwentị mbụ. Mgbe nwa akwukwo ọhụrụ ga - agafe ule nyocha ha ga - eme ka i guzosie ike maka mkparita uka nyocha. Ma ihe ọ bụla ị maara gbasara Google ntinye aka gụnyere kọntaktị koodu maka gị. Mgbe ị gafere usoro ahụ n'oge ahụ. Ị ga-enwe nzukọ na onyeisi njikwa. Na akụkụ na-adịghị mma, ha nwere ike ịchọ ka ị were kwadaa ma ọ bụrụ na ị bịa Google.
Ha bụ ụlọ ọrụ siri ike. Na Google na-achọ nanị maka ndị ọrụ kachasị mma site na gburugburu ụwa. Google na-aga ugbu a maka nbudata ekwentị. Yabụ, ọ bara uru ịnweta ha ọrụ n'ọnọdụ ha na ngalaba a. N'ihi na n'ezie, Google Management ọrụ na Dubai ga-ebili n’ọdịnihu dị nso.
Mmechi maka ọrụ visa na Dubai
Chọ ọrụ na visa ọ dị mfe. Citylọ ọrụ Dubai City na-enwe olileanya na ugbu a na-enye gị ozi zuru ezu. Maka ịchọrọ ọrụ na Dubai na Abu Dhabi. Anyị nwere olile anya na ị ga-etinye akwụkwọ nke anyị nyere gị. Kwesịrị inyere gị aka ịnweta ọrụ dị ịtụnanya mgbe ị na-arụ ọrụ nbanyeghachi na Dubai. Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka karịa na nyocha ọrụ gị. Biko lee anya na anyị Post CV / Bulite Abalite mpaghara. Site na saịtị anyị, biko nọgidenụ na-aga ma mee nnyocha miri emi maka ahịa ọrụ Middle East. Anyị na-edebe mkpịsị aka anyị maka ndu ohuru gi na United Arab Emirates.